Hery - Tsiky dia ampy | Vaovao | 3
Serasera eto Roma: Tongava daholo :-)
2008-07-02 @ 08:45 in Vaovao
Dia raikitra indray izany ny fihaonan'ny namana serasera.org eto Roma amin'ity vakansy ity. Ity no fihaonana faharoa hotanterahina eto Roma... ny fihaonana tamin'ny toerana hafa moa dia efa nisinisy ihany (Paris, Antananarivo, Mahajanga, Nice, sns.) (tohiny)
2007-09-07 @ 07:00 in Vaovao
Dia nindaosin'ny fahafatesana ihany koa i Pavarotti omaly maraina teo amin'ny faha 71 taonany. "Tenor" malaza eran-tany efa efa-polo taona mahery izao. Tamin'ny taona 1961 tokoa mantsy no nanomboka nalaza ny fahaizany mihira amin'ny Opera. Niitatra era-tany izany lazany izany ka noho izy dia betsaka ny olona no nanjary tia sy nahalala ny momba ny Opera. (tohiny)
P. Paul-Louis: ilo tsy very
2007-09-06 @ 11:40 in Vaovao
Tontosa ny fandevenana an'i P. Paul-Louis. Napetraka ao amin'ny fasan'ny Zezoita ao Tiburtina izy. Nisy maromaro ihany izahay Malagasy teto Roma no tany, ary nisy vazaha vitsivitsy koa. Koa satria toerana tsy azon'ny fiarakodia tsotra naleha ny toerana namoahana azy dia nakan'ny Zezoita fiarabe iray izay Malagasy te handeha handevina. Nohiraina teny an-dalana ny hira sasany izay tena nahafantarana azy "Ahiratray ny masonay", "Jesoa Kristy" (Nanjohy iny lalana iny). Tsy afaka tao antsaina ny teny nambarany, indrindra ireo hafatra izay toa efa napetrapetrany tamin'ny lamesa farany niarahana tamin'ny tamin'ny volana jiona. Mandalo tokoa ny olombelona.
Betsaka ny mamy navelan'i P. Paul-Louis. Samy mahatsapa an'izany izay nifanerasera taminy. Ny anisan'ny tsapako dia ny nahatafatsangana ny Aumonerie Malagasy eto Italia izay izy no Aumonier voalohany. Dia ny toriteniny manaitra ny ati-fanahy ihany koa.
Ilo tsy very ao amin'ny tsirairay izany. Mba ho maty namela mamy tokoa izy. Hoy ilay mompera namaly ny teny fampiononana hoe "Nozarazarainy tamintsika tsirairay ny fony... ny fitiavany, mitoetra ao am-pontsika ny zavatra nataony... koa ny fampiroboroboana izany no fahatsiarovana lehibe mendrika azy."